कता हराए दर्शक ? डेढ करोड लगानी, हातमा ५ लाख  Hamrosandesh.com
कता हराए दर्शक ? डेढ करोड लगानी, हातमा ५ लाख
कलाकार दीपकराज गिरीले तीन दिन अगाडि फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे, ‘दर्शक हराएको सूचना !’ उनको स्टाटसको अर्थ थियो– चलचित्र घरमा चलचित्र छन् तर दर्शक छैनन् ।
गत हप्ता तीन वटा चलचित्र रिलिज भए– ‘रणवीर’, सय कडा दश’ र ‘गोपी’ । तीन वटै चलचित्र अपेक्षा गरिएका थिए । तर, कुनै पनि चलचित्रले दर्शक तान्न सकेनन् । त्यसैले गिरीले लेखेका थिए, ‘दर्शक हराएको सूचना !’
दर्शक नआएपछि हलहरुले शो क्यान्सिल गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । “आश गरेका चलचित्रमा पनि चलिरहेका छैनन्,” गिरी भन्छन्, “दर्शक नआएर शो क्यान्सिल भइरहेका छन् । तर हाम्रा चलचित्रकर्मी साथीहरु भने घुम्नमै व्यस्त छन् ।”